Gerrard oo sheegay inay kooxiisa Liverpool ku dhameysan karto kaalinta afaraad ee Horyaalka. - Caasimada Online
Home Warar Gerrard oo sheegay inay kooxiisa Liverpool ku dhameysan karto kaalinta afaraad ee...
Gerrard oo sheegay inay kooxiisa Liverpool ku dhameysan karto kaalinta afaraad ee Horyaalka.
Kabtanka kooxda Liverpool Steven Gerrard ayaa daaha ka qaaday in sanadkaan ay kooxdiisu xooga saareyso inay ku dhameysato kaalinta afaraad ee Horyaalka Ingiriiska, iyadoo uu hugaamiye u noqday macalinka cusub ee Brendan Rodgers.
Reds ayaa ku bilaabatay sanadkaan natiijo aan fiicneyn waxayna keliya guuleysatay afar kulan 11 kulan ee ugu horeysay, laakiin Katan Fantastik ayaa kalsooni ku qaba in kooxdiisu ay soo ceshato booskeedii Champions League.
Mar wax laga weydiiyey dareenkiisa sanadkaan ee Liverpool, Gerrard ayaa si fudud ugu jawaabay: “Afarta sare iyo koob,” isagoo la hadlaayey BBC’s ‘Football Focus’.
Liverpool ayaa guul darro 3-2 ah kasoo gaartay Udinese oo ciyaar ka tirsan Europa League kula ciyaartay garoonkeeda, laakiin 5-2 ayey ku dubteen kooxda Norwich City kulankoodii ugu dambeeyey ee Premier League, wuxuuna Gerrard dareen san yahay in kooxdiisu ay hada cagta saartay wadadii guusha.
“Guushii Norwich waxay noo ahaan doontaa niyad dhis. Waxaan leenahay xoogaa dhibco ah laakiin kooxuhu waxay isku diyaariyaan inay si adag noola ciyaaraan.”